Uncategorized | Codka Shacabka Soomaaliyeed | Baal 2
Guddiga Doorashooyinka: Qof isagu wax raba, wax qeybintiisa ma lagu kalsoonaan karaa?
19/06/2016 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Waa yaabka yaabkii! Waa waxaan horay loo arag! Waa waxaan laga filanaynin qof caqli u saaxiib ah oo weliba masuul ah, waase wax haddii wararka la helayo ay run yihiin u baahan in feejignaan dheer laga yeesho sida ay dowladda Xasan Shiikh iyo madaxda maamul goboleedyadu u rabaan inay u boobaan xubnaha loo dooran rabo baarlamaanka hadda la wado in doorto.
Muddo hadda laga joogo qiyaastii sanad ayaa dowladdu magacawday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo ka koobnaa 9 xubnood oo ay guddoomiye u ahayd Xaliimo Ibrahim Ismacill (Xaliimo Yarey) ayaan guddigaas oo aan la kala dirin oo sidiisii u dhisan, Madaxweyne Xassan Shiikh soo saaray guddi cusub oo isagana la yiraahdo guddiga doorashooyinka oo ka kooban xubno ka kala socda DFS, Maamul goboleedyada iyo xubno iyaga loogu magac daray aqoonyahanno. Waxaana dad badani weli la yaaban yihiin labadaan guddi doorashooyin sida ay u kala shaqeyn karaan iyo weliba awoodaha kala duwan ee ay tahay inay kala yeeshaan. Mase magacaabidda guddigaan cusub waxa uu meesha ka saarayaa kii hore oo dhammaan howsha doorashooyinka waxaa horjoog ka noqonaya guddigan cusub? Dheeho inta ka hartay qormadaan →
Qeybtii 2aad ee wareysiga agaasimihii hore ee waaxda waxbarashada G/B uu siiyayIdaacadda Goob-Joog.
Halkaan ka dhegeyso qeybta 2aad ee wareysigaan oo runtii meelo kala duwan taaban doona.
Doodo badan oo ay dhalisay 60 iyo dhowrka shaqaale oo uu Muungaab (Guddoomiyaha G/Banaadir) shaqada ka ceyriyay.
28/06/2015 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Waxaan isku daynay inaan u kuur galno tirada intaas la eg ee hal mar shaqada laga ceyriyay waxa kallifay iyo weliba sida loo maamulay arintaas iyo haddii ay waafaqasan tahay sharciga uu Muungaab ku soo qoray warqadda uu saxiixay ee shaqada looga ceyrinayo shaqaalaha intaas la eg.
Waxaanse baaritaankeenna ka billownay, in arintani tahay mid uu Muungaab kaligii wato iyo in ay la og yihiin madaxda kale ee gobolka Banaadir. Waxaana warar lagu kalsoon yahay aan ku helnay inuusan xattaa ku xigeenka Maamulka iyo Maaliyaada oo ay isaga tahay inay hoos yimaadaan xafiiska shaqaaleysiinta uusan xattaa ka warheynin, qaabka iyo sababta shaqaalaha intaan la eg shaqooyinka looga ceyriyay. Dheeho inta ka hartay qormadaan →